Ityala lokuSebenzisana-i-Dongguan Taiyang Textile Chemicals Co, Ltd.
IQela loPhando le-Weiqiao ifikelele kwintsebenziswano nathi
Ubuvulindlela be-Weiqiao bufikelele kwintsebenziswano kunye nathi kwaye yayalela iqela leemveliso kwinkampani yethu ukufezekisa intsebenziswano elungileyo kunye nokufumana ukwaneliseka kwabathengi. I-Shandong weiqiao group group ye-coin., Ltd. ikwisiporo se-zouping, iphondo le-shandong, ikwindawo yentaba ye-shandong taiyi kunye nethafa lezikhukula letyhutyha yomantla e-shandong egcwele indawo, idolophu yemizi-mveliso empuma ye-zibo, ngasentshona yiJinan. , ikomkhulu lephondo le-shandong. Umgaqo kaloliwe oMazantsi e-jiaoji, emantla oMlambo i-Yellow, iikhilomitha ezingama-26 ziqengqelekile kwindawo yonke, iikhilomitha ezingama-62 kude nesikhululo senqwelomoya sase jinan, lula, indawo ephezulu. Iqela le-Weiqiao liqela elikhulu elinamashishini amakhulu abandakanyeka ikakhulu kushishino lweendwangu, kunye neenkxaso-mali ezili-11 kunye nenkampani enye edibeneyo. Amashishini ayo aphambili ayashukuxa kwaye ayaluka, aprinta kwaye adaya, ayithengisa yonke into ethengisayo kunye nokuthengisa kwimveliso yengubo, ukungenisa nokuthengisa ngaphandle, njl.
I-Beijiang Textile ifikelele kwintsebenziswano nathi
I-Beijiang Textile ifikelele kwintsebenziswano nathi, Kuba inkampani ilawula ngokungqongqo umgangatho weemveliso zayo, I-Taiyang Textle Auxliaries ifumene udumo kunye nodumo kwiCandelo, kwaye iphumelele indumiso evela kubasebenzisi abaninzi bamaphondo asekhaya kunye nakwinxalenye zelizwe. , I-Bejiang Textile ihamba phambili kwiSixeko saseShaoguan, kwiPhondo laseGuangdong. Umzi-mveliso we-Shaoguan ugubungela ii-eks ezingama-320 kwaye umzi-mveliso we-vietnam ugubungela ummandla oziihektare ezingama-200, umzi-mveliso waseVietnam okwangoku uneeseti ezingama-480 zesizukulwana se-ITEMA sokugqibela se-R9500 denim denim rapys. Iimveliso zeenkampani zisetyenziswa ngesandla zibandakanya amalaphu edenim, amalaphu edaywe-imisonto, amalaphu edayiweyo, kunye nezambatho ezine zengubo esekwe kuzo zonke izinto zelaphu ezikhoyo. Ukuza kuthi ga ngo-2013, intengiso iyonke ibalelwa kuma-50s okuthengiswa kwendlu kunye nokuthumela ngaphandle
I-Guangdong Dahongma Industrial Co, i-Ltd.reached intsebenziswano nathi
Guangdong Dahongma Viwanda Co, Ltd. ifikelele kwintsebenziswano nathi. Njengoko inkampani ilawula ngokungqongqo ubulunga beemveliso, I-Taiyang Textile Auxiliaries ifumene igama elithile nodumo kushishino, kwaye iphumelele ukungaguquguquki kwabasebenzisi uninzi lwamaphondo asekhaya nakwinxalenye yelizwe. Indumiso. Guangdong Dahongma Viwanda Co, Ltd. Yasekwa ngo-1984, Le nkampani igxile kutyalo-mali lwesayensi nezobuchwephesha, ukumiliselwa kwezixhobo, ukuveliswa kwetekhnoloji, uqeqesho lwabasebenzi kunye nolawulo olungqongqo. Yazisa inkqubo yase-United States yokujonga ekhompyutheni kunye nokuhambelana kombala, izixhobo zokuvavanya ezizenzekelayo, umatshini wokudaya osecaleni, iTaiwan edaya i-automation drip feeder, ii-aids, i-Italia yokuwomisa rhoqo, umatshini wokuhambisa umbane waseSwitzerland, umatshini wokuthumela imiyalezo, uthotho lwemveliso ephezulu yobugcisa. izixhobo, imveliso yokuma enye. Izixhobo ezikumgangatho ophezulu zedayi, idayi yokungenisa elizweni, ulawulo lomgangatho ongqongileyo, ulawulo lwenethiwekhi yanamhlanje, abagxile kwimveliso, yodaya umsonto, isilika, umgca weenkampani ezizodwa zemveliso.
UZhongshan Yida Apparel Limited wafikelela kwintsebenziswano nathi
UZhongshan Yida ufikelele kwintsebenziswano nathi. I-Zhongshan Yida Apparel Limited ngumenzi omkhulu weempahla ze-denim ezityalwe kwi-Hong Kong phantsi kweCrystal Group, eyasekwa ngoDisemba ka-2003, kutyalo-mali olupheleleyo phantse i-HK $ 500 yezigidi kunye nendawo ephantse ibe ziimitha ezili-130, 000 ixhotywe kulwakhiwo lwemveliso lwangoku , iiofisi ezikrelekreleyo, kunye nezakhiwo ezilungiselelwe abasebenzi. Indawo eluhlaza isityalo i-30% yendawo iyonke, kwaye yaziwa ngokuba ngumzi-mveliso wegadi.
Inkampani ifumaneka kwiShunjing Industrial Park, kwidolophu yaseBanfu, kwisiXeko saseZhongshan, kwiPhondo laseGuangdong, kufutshane ne-National Highway 105. Ukuhlala kwindawo ephezulu yeSixeko saseZhongshan, inkampani iyonwabela izithuthi ezifanelekileyo kunye nendawo entle yomzi-mveliso, isenza indawo elungileyo sebenza kwaye uphile. Okwangoku, kukho amawaka abasebenzi, kwaye ixabiso lonyaka lingaphezulu kwewaka lezigidi zeean. Iimveliso zabo ikakhulu zithunyelwa ngaphandle, kwaye abathengi babo kwihlabathi liphela. Inkampani ihlala ibambelela "kwimveliso eluhlaza, kuphando lobugcisa kunye nophuhliso lwendlela, kwaye, kunye nophando olunamandla lwesayensi kunye nemveliso yokudityaniswa kwemveliso, ukuthengisa kunye nophando ngamashishini amancinci eemveliso zentengiso, iminyaka emininzi ngokuthunyelwa kwempahla kwamanye amazwe eTshayina. I-United States ibhulukhwe yemqhaphu eUnited States ikwelinye ilizwe, iTshayina lelinye lawona mashishini makhulu athengisa iimpahla kumazwe angaphandle.
I-Texhong Textile Group Limited ifikelele kwintsebenziswano nathi
I-Texhong Textile Group Limited ifikelele kwintsebenziswano nathi. I-Texhong Textile Group Limited (HK 2678) yasekwa ngonyaka ka-1997 ngu Mnu. Hong Tianzhu.
Iqela ngokuyintloko libandakanyeka kwimveliso kunye nasekuhanjisweni kwemisonto esemgangathweni, amalaphu egrey kunye namalaphu ezambatho, ngakumbi amaxabiso aphezulu afakiweyo asisiseko-kunye nempahla yelaphu lekotoni. Ngoku yenye yezona zinto ziphambili kubanikezeli bezendwangu zelakthi emhlabeni kwaye iyindawo ehamba phambili yeshishini lokuhanjiswa kwamalaphu egxile ekuveliseni iimveliso zelaphu elinomgangatho ophantsi olongeziweyo. Ukusukela ngo-1997, Iqela likhule ngokukhawuleza kwaye linabathengi abangaphezu kwama-3,000 e-China nakumazwe aphesheya, inethiwekhi yayo yentengiso ithatha i-PRC, iYurophu, uMzantsi Korea, i-HongKong ne-Bangladesh. Inentloko yayo yokuthengisa esekwe eShanghai, Iqela lisebenza ngezolimo ezili-12 ezifanelekileyo eChina (ngaphakathi kweYangze River Delta) kwaye inesiseko sokuvelisa eVietnam esinemveliso engaphezulu kwe-2,160,000 spindles kunye nama-572 air-jet looms. Ngenkcubeko yabo "yokudibanisa, ukusebenzisana, ubuchule, ukugqwesa", eli qela lisungule isicwangciso salo sophuhliso njengezobuchwephesha, ezinobunkunkqele kunye nokwenziwa kwezizwe ngezizwe. Ngelixa lizimisele ukuba yishishini elinempembelelo nelikhokelela kwishishini laseTshayina, Iqela lizibophelele ekwandiseni ixabiso kumnini zabelo, abathengi kunye nokwenza igalelo kuluntu.